के तेस्रो लिङ्गी गर्भवती हुन सक्छन् ? « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
के तेस्रो लिङ्गी गर्भवती हुन सक्छन् ?
के तपाईले कहिले सोच्नु भएको छ ? तेस्रो लिङ्गी व्यक्ति गर्भवती बन्न सक्छन् ? तर, हामी सबैलाई थाहा छ की तेस्रो लिङ्गी जसको लिङ्ग चिकित्सकद्धारा बनाइने लिङ्ग भन्दा फरक हुन्छ । तेस्रो लिङ्गी वा समलिङ्गी हुनु मानसिक हुन सक्छ या शारीरिक तथा दुवै पनि हुन सक्छ ।
क्रोमोजोम असामान्य हुनुको कारण तेस्रो लिङ्गी यस्तो क्रोमोजोमका साथ जन्म लिन्छन्, जसको कारण कुनै निश्चित लिङ्ग अन्तर्गत हुदैँनन् । उदाहरणका लागि यस्तो पनि हुन सक्छ की तेस्रो लिङ्गी महिला जसको जन्मने समयमा केटा हुन्छ तर उसको व्यक्तित्व महिला जस्तो हुन्छ, उसको क्रोमोजोम ह्थ् हुन्छ ।
जुन वास्तवमा पुरुषको क्रोमोजोम हो । तर, उसको गर्भाशय हुदैन । यसैप्रकार एक तेस्रो लिङ्गी पुरुषमा ह्ह् क्रोमोजोम पाउन सकिन्छ तर उसको गर्भाशय र डिम्बाशय हुन्छ । हुनत, उसमा केही पुरुषको गुण पनि पाउन सकिन्छ । जस्तै आवाज गहिरो हुनु तथा कसैको आन्तरीक पुरुषको गुप्ताङ्ग पनि विकसित हुन सक्छ ।
गर्भावस्था र तेस्रो लिङ्गी हुनु
तसर्थः ह्ह् क्रोमोजोम हुने तेस्रो लिङ्गी पुरुषको गर्भधारण हुने संभावना हुन सक्छ । किनकी उसको ओभरी र गर्भाशय हुन्छ । हुनत यदि कोही तेस्रो लिङ्गी महिला गर्भवती हुन चाहेमा उसको केही मेडिकल प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने हुन्छ । जस्तो उसको पेटमा भ्रूण प्रत्योरोपण गर्ने तथा हार्मोन थेरापी गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो पनि देख्न पाइन्छ की तेस्रोलिङ्गी महिलामा यसप्रकारको गर्भावस्था धेरै खतरनाक हुन सक्छ तथा संभवत उसको ज्यानको खतरा समेत हुन सक्छ ।
किनकी भ्रूणको विकासको कारण छेउका अंगलाई पनि प्रभावित पार्न सक्छ । यसको साथै तेस्रो लिङ्गी महिलामा यस प्रकारको अस्थायी गर्भावस्थाको कारण धेरै प्रकारका समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुनछ । जसमा भ्रूण बाहिर विकसित गरिएको हुन्छ, किनकी तेस्रोलिङ्गी महिलामा गर्भाशय हुदैन ।
तसर्थः गर्भावस्था केवल तेस्रो लिङ्गी पुरुषमा नै संभव हुन्छ । यदि उसको डिम्बाशय र गर्भाशय क्रियाशिल रहेको अवस्थामा । विशेष प्रकारको हार्मोनल उपचारद्वारा उसको गर्भावस्था एकदम सामान्य र स्वस्थ हुन सक्छ । हुनतः तेस्रो लिङ्गीलाई समाजमा नकारात्मक रुपमा लिइने हँुदा धेरै तेस्रोलिङ्गी पुरुष गर्भ धारण गर्ने तथा परिवार बनाउन साबधान हुन्छन् । उनीहरु डराउछन् की समाजमा यसको परिणम उसको बच्चालाई नपरोस् ।
हुन त दुध पिउनु स्वास्थ्यको लागि निकै फाइदाजनक मानिन्छ ।..
दिमाग बढाउने सरल उपायहरु
गर्भवती महिलाले के गर्न हुने ? के गर्न नहुने ?
सबैले ध्यान दिन पर्ने कुरा गर्भावस्थामा के गर्न हुने, के..
बल्ल आएर सुशीला कार्कीले एक वर्ष पुराना फैसलामा हस्ताक्षर गरेको खुलासा
गर्भवती पत्नीका अंगहरू सुन्निने गरेर कुट्ने को हुन् यी हेमन्त भट्टराई ?